တဆေးကူးစက်မှုများအတွက်အိမ်တွင်းကုစား (ကုသမှုနှင့်ကာကွယ်ခြင်း) ၁၂ - ကျန်းမာရေး | ဇွန်လ 2022
ကုမ္ပဏီသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုမ္ပဏီ, သတင်း သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ၊ နှိပ်ပါ ကုမ္ပဏီ
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> တဆေးကူးစက်မှုများအတွက် 12 အိမ်မှာကုစား
တဆေးကူးစက်မှုများအတွက် 12 အိမ်မှာကုစား
တဆေးကူးစက်မှုသည်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်းအမျိုးသမီးများသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောကူးစက်ရောဂါများသည်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းနှင့်ဆေးညွှန်းသို့သွားရန်လိုအပ်သော်လည်းတဆေးကူးစက်မှုအတွက်ကြိုတင်ဆေးရောင်းရန်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အိမ်တွင်းဆေးကုထုံးများစွာရှိသည်။ တဆေးကူးစက်မှုကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်၊ ဆရာ ၀ န်သို့မည်သည့်အချိန်တွင်သွားရမည်၊ အိမ်၌တဆေးရောဂါကူးစက်မှုကိုမည်သို့ကုသရမည်နှင့်၎င်းတို့အားထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းမှမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောတဆေးရောဂါကူးစက်မှုအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်းခန္ဓာကိုယ်၏anရိယာသည် Candida ဟုခေါ်သည့်တဆေးကဲ့သို့မှိုများ (တဆေးကူးစက်ခြင်းများ) နှင့်ကူးစက်ခံရသောအခါဖြစ်ပျက်သည်။ ဤမှိုသည်စိုထိုင်းသော၊ နွေး။ ခေါက်သိမ်းထားသောနေရာများဖြစ်သောပေါင်ခြံ၊ ရင်သားအောက်၊ Candidiasis သည်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှဖန်းဂတ်စ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှု၏အဓိကအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တဆေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပါးစပ်၊ အူ၊ လည်ချောင်းနှင့်ယောနိတို့တွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ Niket sonpal , MD, နယူးယောက်ရှိ internist နှင့်အစာအိမ်ရောဂါအထူးကု။ အကယ်၍ ၎င်းကိုဆေးဝါးများဖြင့်မှန်ကန်စွာမကုသပါက၎င်းသည်ထိန်းချုပ်မှုမှကြီးထွားလာပြီးသင်၏ကျောက်ကပ်နှင့်နှလုံးကိုရောဂါကူးစက်စေနိုင်သည်။
Candida မှိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တည်နေရာပေါ်မူတည်ပြီး Candida အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးရောဂါကူးစက်မှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့မှာလက္ခဏာတွေထပ်တူကျနေပေမယ့်လည်းကွဲပြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် Candida ကူးစက်မှုများမှာ -
Cutaneous Candidiasis ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိအရေပြားကိုကူးစက်သည့်အခါဖြစ်ပျက်သည်။ Candida ကြီးထွားလာသည့်နေရာများမှာလက်ချောင်းများ၊ ခြေချောင်းများ၊ လက်သည်းများ၊ လက်မောင်းများ၊ ရင်သားများအောက်၊ အဓိကလက္ခဏာမှာအနီရောင်ယားခြင်း၊
အနှီးအဖု ကလေးများတွင်တစ်ခါတစ်ရံ Candida များပြားလွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။ ၎င်းသည်စိုစွတ်သောအနှီးများမှ candida ရှင်သန်ရန်ကူညီပေးသောစိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည့်အခါတွင်ဖြစ်တတ်သည်။ အသားအရေတွန့်မှုကြားတွင်အနီရောင်အဖုများထွက်လာပြီးအစက်အပြောက်များသည်ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်နေရာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ခံတွင်း thrush candidiasis သည်ပါးစပ်သို့မဟုတ်လည်ချောင်း၏နံရံကိုထိခိုက်သည့်အခါဖြစ်တတ်သည်။ ပါးစပ်ထိုးသည်ပါး၏အတွင်းပိုင်းသို့မဟုတ်လျှာပေါ်တွင်အဖြူရောင်တွေ့ရှိခြင်းများဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများတွင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမကောင်းခြင်း၊ မျိုချခြင်း၌နာကျင်ခြင်း၊ အရသာပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနှင့်ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အင်္ဂါဇာတ်တဆေးကူးစက်မှု ယောနိတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်းမြင့်တက်လာသည့်အခါ vulvovaginal candidiasis ဟုလည်းခေါ်သည်။ Candida albicans သည်တဆေးကိုရောဂါကူးစက်မှုတွင်ပုံမှန်ဖန်းဂတ်စ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယောနိတဆေးဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှု၏လက္ခဏာများမှာယားယံခြင်း၊ ယားခြင်း၊
ဒေါက်တာ Sonpal ကတဆေးဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှုသည်အဖြစ်များလေ့ရှိပြီးအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တွင် ၄ ယောက်လျှင် ၃ ယောက်တွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်တဆေးကူးစက်မှုသည်အမျိုးသမီးအများစုတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသောကြောင့်ဤဆောင်းပါးသည်အင်္ဂါဇာတ်တဆေးကူးစက်မှုကိုသာကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်တိကျသောဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒေါက်တာ Sonpal ကတဆေးဖြင့်ကူးစက်ပျံ့နှံ့လွယ်သောဗိုင်းရပ်စ်များသည်သူတို့ဘာသာသူတို့သွားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုရှင်းပြသည်။ သို့သော်ဆေးကုသမှုမခံယူရလျှင်တဆေးကူးစက်မှုကိုလျစ်လျူရှုရန်မလိုအပ်ပါ။
အချို့သောသူများသည်တဆေးပါရောဂါကူးစက်ရန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကုသရန်ဆေးဝါးကုသရန်အိမ်တွင်းဆေးကုထုံးများကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ကြသော်လည်းအချို့လူများသည်တဆေးပါရောဂါကူးစက်ခံရသည့်အခါဆရာဝန်ထံသွားသင့်သည်။ ဤလူနာများတွင် -
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါ (STD) နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူများ
တန်ပြန်ဆေး antifungal ဆေးများသည်တဆေးကိုရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်းအသုံးချရန်လိမ်းဆေးသို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။ တဆေးထိုးရောဂါသုံးရက်ကနေနှစ်ပတ်အထိကြာနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်တစ်ရက်၊ သုံးရက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကြာကုသမှုတွေရနိုင်တယ်။
ပြင်ပယားယံခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ကုသမှုအများစုနှင့်အတူပါလာသည့်ဖန်းဂတ်စ်မှိုရောဂါကာကွယ်ဆေးများလည်းရှိသည်။ လိင်အင်္ဂါမှတဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများကိုကုသရန်လူကြိုက်အများဆုံးဖန်းဂတ်စ်မှိုဆေးများဖြစ်သည်Monistat(Monistat ကူပွန်ကိုရယူပါ။ Monistat ဆိုတာဘာလဲ?) သို့မဟုတ် Vagistat ။ စတိုးဆိုင်တွင် ၀ ယ်ရန်မသက်မသာသောသူများအတွက်ဤကုသမှုများကိုလည်းအွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ် ဦး ကညွှန်းနိုင်သည်Diflucan (Diflucan ကူပွန်များ | Diflucan အသေးစိတ်)fluconazole ( fluconazole ကူပွန် |fluconazole အသေးစိတ်ကို)ဖန်းဂတ်စ်မှိုရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသပေးမည့်တက်ဘလက်တစ်ခုသို့မဟုတ် terconazole ကဲ့သို့ဆေးညွှန်း antifungal တို့ကိုသုံးပါလိမ့်မည် (Tersonazole ကူပွန် |terponazole အသေးစိတ်), အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာပြည်တွင်းရေးဖြည့်စွက်သော။
၁။ Apple cider ရှလကာရည်
Apple က cider ရှလကာရည် Candida albicans ၏ကြီးထွားမှုကိုဟန့်တားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်
ဤသဘာဝကုစားနည်းကိုသုံးရန်ရေချိုးပါ၊ ပန်းသီး cider ရှလကာရည်တစ်ဝက်ထည့်ပြီးအနည်းဆုံးမိနစ် ၂၀ ခန့်ရေချိုးပါ။
အစွမ်းကုန်အားဖြင့်ပန်းသီး cider ရှလကာရည်ကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်။ ပန်းသီး cider သည်ဘက်တီးရီးယားနှင့်မှိုများကိုသတ်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကောင်းသောဘက်တီးရီးယားများကိုလည်းသေစေနိုင်သည်။ မသုံးမီပန်းသီး cider ကိုရောမွှေပါ။
2. Boric အက်ဆစ်
Boric အက်ဆစ်အင်္ဂါဇာတ် suppositories ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ boric အက်ဆစ်ရဲ့ပိုးသတ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများ၏တဆေးကိုရောဂါကူးစက်မှုကိုကုစား။ စဉ်တွင် သုတေသနအထောက်အပံ့များ ဒီ suppositories ၏အသုံးပြုမှုကိုကဒီတဆေးကိုရောဂါကူးစက်မှုကိုမှုများထပ်တလဲလဲနှင့်ခက်ခဲများအတွက်သာအသုံးပြုသင့်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။ boric အက်ဆစ်သည်အလွန်အစွမ်းထက်သောကြောင့်နူးညံ့သောကုသမှုကို ဦး စွာအသုံးပြုသင့်သည်။
အုန်းသီးအသားမှထုတ်ယူထားသောအုန်းရေနံသည်သဘာဝအလျောက်ဆန့်ကျင်သောဖန်းဂတ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းဂုဏ်သတ္တိများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ က သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာချက် တွေ့ရှိရသည့်အုန်းဆီသည်တဆေးကိုရောဂါကူးစက်စေသည့် Candida ဘက်တီးရီးယားများကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဤကုသမှုကိုအသုံးပြုရန်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့အုန်းဆီကိုသာအသုံးပြုပါ။
4. Cranberry ဖျော်ရည်သို့မဟုတ်ဆေးပြား
Cranberry ဖျော်ရည် နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် ဆီးလမ်းကြောင်းကူးစက်ရောဂါ Candida albicans (တဆေးကူးစက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမှို) ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်။ လိင်အင်္ဂါမှ Candida albicans ကိုကုသရန်စွမ်းရည်သည်လေ့လာမှုမပြသော်လည်းအချို့အမျိုးသမီးများကရလဒ်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ Cranberry ဖျော်ရည်နှင့်ဆေးပြားများသည်ဗီတာမင်စီဓာတ်အလွန်များပြီး၎င်းသည်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
ကြိုတင်ဆေးရောင်းဝယ်သူများသည်တဆေးပါရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းများကိုသက်သာစေသည်။ သို့သော် လေ့လာမှုအများစု douching ၏ဆိုးကျိုးများကိုပြသနှင့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်အပြုသဘောရလဒ်များပေး။ အရ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးရုံး ဆရာဝန်များကဆရာဝန်များကအမျိုးသမီးများသည်အစာမကျွေးရန်နှာခေါင်းရှူခြင်းကကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါမှကူးစက်ခြင်းနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုပြန့်ပွားစေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်ဖြူဆီတို့ကလူသိများတဲ့ဖန်းဂတ်စ်ကာကွယ်ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ လေ့လာရေး Candida albicans ကိုဆန့်ကျင်။ ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုပင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ပိုမိုရိုးရာနည်းလမ်းများဖြင့်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်ကိုယောနိထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းရန်အကြံပြုနိုင်သော်လည်းထိုးဖောက်ရန်နည်းသောနည်းလမ်းမှာကြက်သွန်ဖြူကိုပိုမိုစားသုံးရန်နှင့်အစားအစာများပိုမိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်က ခိုင်မာတဲ့ပိုးသတ်ဆေး ဒီတဆေးကိုသတ်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် ၎င်းသည်တဆေး၏အင်္ဂါဇာတ်ကူးစက်မှုအမျိုးအစားများအပေါ်အထူးလေ့လာခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။ ယောနိကိုမသုံးစွဲမီဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို ဦး စွာဖြုန်းပါ။
၈) Oregano ဆီ
Oregano ရေနံ, ဒါမှမဟုတ် origanum ရေနံ, ပြသလျက်ရှိသည် ကြီးထွားမှုကိုတားစီး candida albicans ၏။ oregano ရေနံကိုသုံးရန်အုန်းဆီသို့မဟုတ်သံလွင်ဆီကဲ့သို့သောသယ်ဆောင်သူများတွင်နှစ်ချောင်းကိုသုံးပါ။
Probiotics ထိုကဲ့သို့သောဘက်တီးရီးယားအဖြစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘက်တီးရီးယား, ပါဝင်သည် Lactobacillus acidophilus , ယောနိသည်ဗက်တီးရီးယားပိုး၏ကျန်းမာရေးကိုထိန်းညှိပေးသည်။သူတို့ကကုသမှုသို့မဟုတ်ကာကွယ်တားဆီးလိမ့်မည် ဘက်တီးရီးယား vaginosis တဆေးကူးစက်မှုအပြင်ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း။
အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်များတွင် probiotic ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ပါ။ ဤပါးစပ်ဖြည့်စွက်စာသည်ရလဒ်များကိုပြသရန် ၁၀ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ ရလဒ်များအတွက်အချိန်ကာလကိုလျှော့ချရန်အချို့အမျိုးသမီးများသည်လိင်အင်္ဂါအခေါင်းပေါက်များအဖြစ် probiotics ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒိန်ချဉ်ကို (တက်ကြွ။ တက်ကြွသောယဉ်ကျေးမှုများဖြင့်) စားသုံးခြင်းသည် probiotic စားသုံးမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်များစွာသောသဘာဝကုစားနည်းတူ probiotics များသည်တဆေးပါရောဂါကူးစက်မှုကိုပျောက်ကင်းစေသည့်အထောက်အထားမရှိချေ။ သုတေသီများသည်တဆေးကိုရောဂါကူးစက်ရန်အတွက် probiotics ကိုလေ့လာနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဆရာဝန်များစွာသည်ပantibိဇီဝဆေးကိုသတ်မှတ်ထားသောအခါတိုင်း၎င်းကိုသောက်ရန်အကြံပြုသည်။ တဆေးကူးစက်မှုသည်ပantibိဇီဝဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည် ။
သက်ဆိုင်သော: မည်သည့် probiotics များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းလေ့လာပါ
လက်ဖက်ခြောက်သစ်ပင်ဆီသည်ဖန်းဂတ်စ်မှိုကင်းသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောတဆေးဖြစ်သည်။ အချို့လူများကတဆေးသည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသသည်ဟုဆိုကြသည်။ အဲဒါအလုပ်လုပ်ပါတယ် ဆဲလ်နံရံများကိုသတ်ဖြတ် နှင့်တဆေး၏အမြှေးပါး။ လေ့လာမှုများထပ်မံလိုအပ်နေသော်လည်း 2015 လေ့လာမှု လက်ဖက်ခြောက်ပင်ဆီတွင်ပါ ၀ င်သည့်လိင်အင်္ဂါအဆိပ်သင့်မှုသည် fungicidal agent အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် Candida albicans ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကဲ့သို့ပင်ကိုယ်ခန္ဓာ၌အသုံးပြုသည့်အခါရေနံသေတ္တာနှင့်အတူလက်ဖက်ပင်သစ်ပင်ဆီအနည်းငယ်ကျဆင်းပါ။ အမျိုးသမီးများသည်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းရေနံနှင့်အတူမိန်းမအင်္ဂါဇာတ် suppositories ကိုအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဗီတာမင်စီ (ဗီတာမင်စီကူပွန်များ၊ ဗီတာမင်စီဆိုတာဘာလဲ) သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးကိုယ်ခံအားစနစ်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်တဆေးရောဂါကူးစက်မှုကိုကောင်းစွာတိုက်ဖျက်နိုင်သည်။ လိမ္မော်နှင့်ပန်းဂေါ်ဖီကဲ့သို့သောဗီတာမင်စီကြွယ်ဝသောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်ဗီတာမင်စီထပ်ထည့်ပါ။
ဒိန်ချဉ်သည်အသက်ရှင်သောတက်ကြွသောယဉ်ကျေးမှုများဖြင့်၎င်းသည် probiotic concentrate မြင့်မားသောကြောင့်တဆေးကိုရောဂါကူးစက်ရန်အတွက်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း probiotics များသည် candida albicans ကိုတားဆီးနိုင်သည်။ က မကြာသေးမီကလေ့လာမှု နှင့်အတူ probiotics ပါဝင်သောဒိန်ချဉ်၏စားသုံးမိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Lactobacillus acidophilus တဆေး၏ကြီးထွားမှုကိုနှိမ်နင်းရန်ကူညီပေးသည်။ probiotics ဖြင့်ဒိန်ချဉ်ကိုစားသုံးခြင်းသည်တဆေးရောဂါကူးစက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သော်လည်းအချို့အမျိုးသမီးများသည်ဒိန်ချဉ်တွင် tampon စုပ်ယူခြင်းနှင့်မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်ထဲသို့ထည့်ပေးခြင်းဖြင့်သက်သာရာရပြီးမကြာခဏပြောင်းလဲရန်သတိရကြသည်။ ဤနည်းစနစ်ဖြင့်သာမန်၊ မချိုသည့်ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်မချိုသောဂရိဒိန်ချဉ်ကိုသာသုံးပါ။ သကြားပါဝင်သောဒိန်ချဉ်သည် candida ၏ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
မလိုအပ်သောပantibိဇီဝဆေးကိုမသုံးပါနှင့်။ ပိဇီဝဆေးများသည်လိင်အင်္ဂါမှကျန်းမာသောဗက်တီးရီးယားများကိုသေစေနိုင်သည်၊ တဆေးအလွန်များပြားစေပြီးတဆေးကိုရောဂါကူးစက်စေသည်။
ဝါဂွမ်းအတွင်းခံအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ပါ။ ချင့်ချိန်စရာကောင်းသည့်ဝါဂွမ်းအတွင်းခံများသည်ကျန်းမာသော microbiome ကိုအများဆုံးအထောက်အကူပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော leggings ကဲ့သို့တင်းကျပ်စွာနှင့်အသက်ရှူကဲ့သို့မဟုတ်သောအသက်ရှူမဟုတ်သောအဝတ်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဤအ ၀ တ်များသည် candida အလွန်အကျွံကြီးထွားမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်သောစိုစွတ်သောစိုစွတ်သောcreateရိယာကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အဝတ်အစားများသို့မဟုတ်ရေကူးဝတ်စုံများကဲ့သို့စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ချွေးထွက်သောအဝတ်များကိုလျင်မြန်စွာလဲရန်အရေးကြီးသည်။
ရေပူရေငွေ့များနှင့်ပူပြင်းသည့်ရေပူများရှောင်ခြင်း၊ပူနွေးစိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်များကြောင့် Candida ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေသည်။
probiotics ယူပါသို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ်ကိုစားပါသူတို့ကယောနိ microflora ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကူညီပေးကတည်းက probiotics တွေနဲ့အတူ။ တဆေးကူးစက်မှုများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်, probiotics တဆေးရောဂါကူးစက်မှု၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေကြသည်။ အကောင်းဆုံး probiotic ကိုပါဝင်သောသူများနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည် Lactobacillus rhamnosus GR-1 ဘက်တီးရီးယား ။
ကဲ့သို့သောတဆေးကိုကူးစက်စေသည့်အပြုအမူများကိုရှောင်ပါ ညံ့ဖျင်းသောသန့်ရှင်းရေး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအလေ့အကျင့်များလုပ်ဆောင်သောအခါရှောင်ကြဉ်ပါ အော့အန်ခြင်း၊ ရေမွှေးသန့်စင်ခြင်း၊ ယောနိ၏ microflora ၏ချိန်ခွင်လျှာကိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သောလိင်အင်္ဂါများအနီးတွင်။
သကြားနှင့်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများကိုရှောင်ပါ ။ တဆေးသည်သကြားမှကြီးထွားလာသဖြင့်၎င်းသည်တဆေးတိုးပွားစေသည်။
အချို့အမျိုးသမီးများသည်အခြားရောဂါများထက်တဆေးရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးတခါတရံတွင်တဆေးပါကူးစက်မှုများသို့မဟုတ်နာတာရှည်တဆေးကူးစက်မှုများခံရနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကထပ်တလဲလဲတဆေးကိုရောဂါကူးစက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်:
လိင်လှုပ်ရှားမှု ။ တဆေးကူးစက်မှုသည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါ (STI) မဟုတ်သော်လည်းမိတ်ဖက်များအနေဖြင့် Candida ကိုတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကွန်ဒုံးသို့မဟုတ်ပါးစပ်တွင်းအရည်ခံအကာများကိုသုံးပါ၊ ရေချိုးခြင်းကဲ့သို့သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးနောက်ကောင်းမွန်သောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကိုအသုံးပြုပါ။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး သည်တဆေးပါရောဂါကူးစက်ပါကလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ပါ။
မူလတဆေးကိုရောဂါကူးစက်မှုလုံးဝကုသမခံခဲ့ရပါဘူး ဒါမှမဟုတ်တဆေးမှတစ်ဆင့်ကူးစက်ခံရတဲ့ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ရတာ ဆေးယဉ်ယဉ် ။ ရောဂါကူးစက်မှုကိုအပြည့်အဝမကုသမီရောဂါလက္ခဏာများပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါတဆေးကိုကူးစက်တဲ့ရောဂါပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ အခြားဆေးများထက်ပိုမိုဆေးဝါးခံနိုင်ရည်ရှိသောတဆေးအမျိုးအစားများလည်းရှိသည်။
ဒါဟာတဆေးကိုကူးစက်မဟုတ်ပါဘူး။ အလားတူလက္ခဏာများရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယား vaginosis သို့မဟုတ် STIs ကဲ့သို့သောအခြားကူးစက်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်တဆေးရောဂါကူးစက်မှုမရှင်းလင်းပါကမီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်မူလတန်းစောင့်ရှောက်သူဆရာဝန်ကဲ့သို့သောဆရာ ၀ န်သို့လာရောက်ရန်အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အချို့သောအခြေအနေများနှင့်အတူသူများသည် ချို့ယွင်းကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များ , ကိုယ်ဝန် ,ဒါမှမဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောဆီးချိုရောဂါ ,တဆေးကူးစက်မှုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကူညီနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းတဆေးကူးစက်မှုအတွက်အိမ်တွင်းဆေးများကိုအမေရိကန်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲရေးမှထိန်းချုပ်သည်မဟုတ်။ ရလဒ်များကွဲပြားသည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရောဂါလက္ခဏာများပြေလည်ခြင်းမရှိပါကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တွေ့ပါ။
အကောင်းဆုံးတူရိယာအနှိပ်သေနတ် ၁၆ လက်၊ နှိုင်းယှဉ်။ သိမ်းဆည်းပါ
dr oz အစိမ်းရောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ